NYI LYNN SECK 18+ DEN: ၈မိုင်လမ်းဆုံက ဘိုးတှော့ ခြသေဿင့ကြီး
Posted by NLS at 8/17/2010 11:15:00 PM
15 Responses to “၈မိုင်လမ်းဆုံက ဘိုးတှော့ ခြသေဿင့ကြီး”
ဒီထက်စောပြီးဘယ်ဂျာနယ်မှာမ မမြင်နိုင်ဘူး မှန်တာပေါ့ ဂျာနယ်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက် အင်တနာက်ရဲကအငားသာချက် အားနည်းချက်. ဘလော့ရဲ့အားသာချက.် ဘယ်အဆင့်ကိုမှ မဖြတ်သန်းရတဲ့အချက်. ဒါဟာ ပါဝါလား။ CJ လား
အရင်က လိုင်းကားတွေကုန်တွေ လူတွေမတရားတင် လို့ ကားခေါင်းထောင်ခါနီးလေးဖြစ်နေတာ ရင်တမမဖြစ်ခဲ့ ဘူးတယ်။ အခုတော့မျက်ဝါးထင်ထင် ခေါင်းထောင်နေပီ..
Haha. Fantastic photo indeed. :D
ဖမ်းတဲ့ကြားက လွတ်လာတာ ဆိုတော့ ဌာနဆိုင်ရာ ကားတစ်စီးစီး ဖြစ်ဖို့များပါတယ်.. အပြင်စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ကားတော့ မဖြစ်နိုင်...
ဒီစည်းကမ်းကို ဖောက်နိုင်တာလဲ သူတို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်..
knowledge share said...
Great job..I appreciate about your photo news..thank you..
Maung Min Gyi Tar said...
daily update မဖြစ်ပေမယ့် တင်တဲ့ပို့စ်တွေက ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြပေးထားတော့ ဖတ်ရတာ တကယ်ကောင်းတယ်. အားလဲကျမိတယ်.
ခြင်္သေံ့ဆိုလို့ လာကြည့်တာ ကားခြင်္သေံ့ ဖြစ်နေပါရောလား။ ရန်ကုန်မှာ သစ်တင်ကားတွေ ခဏခဏ မှောက်တယ်နော်။ အသက်အန္တရယ်နဲ့သိပ်နီးတယ်။ သတိထားသင့်ကြပြီ။
သစ်လုံးတင်ကားတွေကြီး မှောက်တာလဲ နှစ်ခါရှိပြီ။ ဒီကုန်ကားတွေဘေးက ခပ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဖြတ်နေရတုန်းပဲ။ solution တော့ရှိသင့်ပြီ။
ကို မြန် မာအားမာန်ရေ
ဌာန ဆိုင်ရာ ကားဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ ကားနံပါတ် ပြားကြည်. ရင် သိသာပါတယ် ဗျာ
နလဗိန်းတုန်း မဟုတ် ရင်ပေါ.. .အုံးနောက်နဲ. စဉ်း စားပါ ဘာဖြစ် ဖြစ် အစိုးရ ကို မကောင်းမြင် စိတ် နဲ. ပေါက်တတ် ကရ မရေး သင်.ပါ ဘူးဗျာ....
ကျနော် အကို့ရဲ့ စနပ်ရှောခ်တွေ ကိုလည်း ခိုက်ပါတရ်
ဖော်ဝါဒ်တွေလည်း ကျနော် လုပ်ဖြစ်ပါတရ် ခင်ဗျ၊၊
အကို ဘယ် ဖောင့်တွေ သုံးတာလဲ ခင်ဗျ၊၊
အချို့ စာ သားတွေ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေ ပဲ
ဥပမာ အကို့ဆိုဒ်မှာရေးထားတဲ့ ပါ ကို ပဇောက်ရေးချ အသေး နဲ့ ပာ လို့ ပေါ်နေတော့
အကို စာသားတွေ က < Par = ပါ > လို့ ဖတ်ရတဲ့ အခါမျိုးမှာ < Ha = ဟ > ပုံပေါက်နေတာ ဂျောင့်ရယ်
ကျနော် သဘော ကျမိတဲ့ ပိုစ်တွေ ဖတ်ခွင့်ကျုံတိုင်း ဖော်ဝါဒ် လေ့ရှိတာေုကာင့် အခြားသူတွေ ဖတ် ရင် အဆင်ပြေတဲ့ ZawG လေးနဲ့ နောက်ပိုစ်တွေ ကို ဖော်ပြပေးစေချင်ပါတရ် ခင်ဗျာ၊၊
ဌာန ဆိုင်ရာ ကားဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ ကားနံပါတ် ပြားကြည်. ရင် သိသာပါတယ် ဗျာ.......
အဲ့နွား အ ဖွဲ့ က ဌာန ဆိုင်ရာ ကား ပဲ သူတို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာ ရင်သုံးတာ သေချာလို့လား
ချောဆွဲတယ် ချောဆွဲတယ် ဆိုတဲ့ စကား ခုထိအမှတ်ရဒုန်း
ကျနော် ရွာမှာနေတုန်းက မရှိမဲ့ရှိမဲ့ လိုင်းကားလေး စစ်တပ်က ချောဆွဲလို့ပါသွားတိုင်း ဒုက္ခရောက်တဲ့ ရွာသားလေး အဖြစ်တောင်
ကိုဇော်ပိုင်ပြောသလို မနေ့ကလိုပဲ ရှိသေးတာ
ဂွိုဟျသားလေး @ Little Alien said...
answer fro uncle bino
the employee broke the law by letting the over weight car come to public transportation line
မြို့လည်ကောင်မှာကြီးဆိုတော့ အရုပ်ဆိုးသလိုပဲ. သစ်တွေတော့ ကုန်ပါပြီး. ပြည်ကြီးလည်း အပူကြီးလို့ လူတွေလည်း သေလိုက်ကတာ နွေက... အခုလိုမြင်ကွင်းက သူခိုးကို လူမိသလိုကြီးနော်....
ကောင်းတယ်ဗျို့ CJ တွေက တစ်ကယ်ကြိုးစားထားတာပဲ။ လေးစားပါတယ်။ အကိုရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ အလဟသမဖြစ်ပါဘူး